Ciidamada Maamulka Somaliland Oo Gobolka Sool Isku Fidiyay iyo Puntland oo digniin soo saartay.
Friday June 13, 2014 - 05:53:15 in Wararka by Super Admin
Ciidamada maamulka isku magacaabay Somaliland ayaa isku fidiyay degmooyin iyo deegaanno katirsan gobolka Sool ee dalka Soomaaliya.
Ciidamada maamulka isku magacaabay Somaliland ayaa isku fidiyay degmooyin iyo deegaanno katirsan gobolka Sool ee dalka Soomaaliya. Boqolaal maleeshiyaad ah ayaa dagaal la’aan qabsaday degmooyinka Xiingalool iyo Taleex oo markii hore uu gacanta ku hayay maamul deegaanka ah oo Khaatumo isku magacaabay.
Afhayeenka ciidanka Somaliland ayaa shir Jaraa’id oo uu ku qabtay magaalada Hargeysa ku sheegay in ciidankoodu ay eryadeedn wax uu ugu yeeray qaswadayaal.
Goob joogayaal ayaa sheegay in degmada Taleex ay ka baxsadeen siyaasiyiin katirsan Khaatumo oo uu kamid ahaa Cali Khaliif Galleyr.
Dhinaca kale Warsaxaafadeed kasoo baxay maamulka Puntland ayaa lagu cambaareeyay qabsashada Somaliland ee Taleex,xafiiska Cabdiwali Gaas ayaa ku hanjabay in ciidamadoodu dagaal toos ah lagelayaan Somaliland.
Hoos Ka Akhriso Bayaanka kasoo baxay Cadi Wali Gaas.
1, Waxay dawladda Puntland la socod siineysaa beesha caalamka in maamulka Somaliland uu duulaan qaawan ku soo qaadey 10 june, 2014 degmooyinka Taleex iyo Xingalool oo ka tirsan dhulka Puntland.
3- Dawladda Puntland waxay mar kale u caddeynaysaa ummadda Soomaaliyed, dawladaha dariska ah iyo beesha caalamka in maamulka Somaliland mar kasta oo ay duulaan kusoo qaadaan dhulka Puntland ay weheliyaan howgalo ay ku taageerayaan ururka Al -shaab ee argagixisada ah si ay uga fuliyaan gudaha Puntland falal argagiso.
4- Ugu danbeyn dawladda Puntland waxay diyaar u tahay iyadoo fulineysa waajibaadka dastuuriga ah in ay difaacdo dhulkeeda iyo dadkeeda.
5- Waxay kale oo ay dawladda Puntland u direysaa baaq nabadgalyo iyo in la joojiyo colaadaha ku soo noqnodey gobolka shabeelada hoose iyo kuwo ka soo cusboonaadey gobolka Galguduud in lagu dhameeyo colaadahaas wado hadal,